Chromium Vagadziri Vakaburitsa RenderingNG Project Optimization Mhedzisiro | Linux Vakapindwa muropa
Chromium Vagadziri Vakaburitsa RenderingNG Project Optimization Mhedzisiro
Vanogadzira Chromium vakafumura munguva pfupi yapfuura mhedzisiro yekutanga yeiyo RenderingNG chirongwa (yakaburitswa makore masere apfuura) inoitirwa kuita basa rinoenderera kuti riwedzere kushanda kweChannel, kuvimbika, uye kuwedzeredza.
Iwo matekinoroji akaitwa mukati meiyo RenderingNG chirongwa chinoshandura zvachose maitiro ekuumbwa uye tendera kushandiswa kunoenderana kweakasiyana matekinoroji kukwidziridza kuverenga paGPU neCUU zvine chekuita nezvezvimwe zvikamu zvemapeji, tichifunga nezvehunhu hwakadai sekugadzirisa uye skrini yekuzorodza mwero, pamwe nekuvapo kwekutsigirwa kweAdvanced Graphics APIs mune system, senge Vulkan, D3D12, uye Metal.
Chinhu chinogumira pakuenzanirana kuri kuita mutoro wakawedzera paCPU, iyo inoratidzwa mukuwedzera kwetembiricha uye nekuwedzera kwesimba kushandiswa, saka zvakakosha kuwana mukana wakaringana pakati pekuita uye simba rekushandisa. Semuenzaniso, kana uchimhanya pane bhatiri simba, unogona kupira kupa kumhanya, asi haugone kubayira scroll scroll mune yakasarudzika tambo, sezvo kuderera kweiyo interface yekuteerera kuchaonekwa kune mushandisi.
Semuenzaniso, optimizations yakawedzerwa muChannel 94 kuburitswa pamusoro peChannel 93 zvakakonzera kukwidziridzwa kwe8% mune peji latency uye ne0,5% kuwedzera muhupenyu hwebhatiri. Zvichienderana nesaizi yeiyo Chrome's mushandisi base, aya manhamba anodudzira pasi rose mukuchengetedza kweanopfuura makore 1.400 emakore eCPU nguva zuva rega rega. Zvichienzaniswa neshanduro dzegore rapfuura, chazvino Chrome inoshandura giraidhi nekukurumidza kupfuura anopfuura 150% uye iri 6x isinganyanye kukundikana kukundwa nemutyairi weGPU pane dambudziko rehardware.
Semuenzaniso we optimizations, iko kushanda kweGPU mameseji caching uye mhedzisiro yekupa zvikamu zvemapeji ewebhu zvinotaurwa, pamwe nekutarisa mukupa chete nzvimbo yepeji inoonekwa kune mushandisi (hazvina musoro kupa zvikamu zvepeji zvakafukidzwa nezvimwe zvemukati).
Pamatekiniki ekugadzirisa akaitwa, anotevera anotaurwa:
Chrome 94 inoratidza iyo InoumbwaAfterPaint injini, iyo inoumba zvakasiyana yakapihwa zvikamu zvemapeji ewebhu uye zvine simba zviyero mutoro weGPU. Zvinoenderana ne data rakagashirwa kubva kumushandisi rinobva mukuunganidzwa kweteremetry, mashandisiro ehurongwa hutsva zvinokwanisika kudzora kunonoka paunenge uchipeta kuenda ku8%, wedzera kupindura kwekudyidzana kwevashandisi kusvika pa3%, wedzera kumhanya kwekukurumidza ne3% uye Inoderedza GPU memory yekushandisa ne3% uye inowedzera hupenyu hwebhatiri ne0,5%.
GPU Raster: rasterization mashini padivi peGPU, yakaverengerwa mumapuratifomu ese muna 2020 uye yakabvumidzwa kukwirisa kupasa kweMotionMark bvunzo neavhareji ye37%, uye zvikamu zvine hukama neHTML, ne150%.
LayoutNG: ndeye yakazara kuongororwa kweye peji chinhu dhizaini algorithms inoitirwa kugadzirisa kuvimbika uye kufungidzira. Iyo purogiramu inotarisirwa kusvika kune vashandisi gore rino.
BlinkNG - Kugadzirisa uye kuchenesa iyo Blink injini, kugovanisa kupa mashandiro muzvikamu zvakasiyana kuvandudza kugona kwecaching uye kurerutsa kupa kwehusimbe, uchifunga nezvekuonekwa kwezvinhu zviri muhwindo.
Kutamisa kwevanodzora vanodzora, kuchangamuka uye kudhirowa kwemifananidzo kupatsanura tambo. Iyo purojekiti yave iri mukuvandudzika kubvira 2011, uye gore rino yasvika mukana wekufambisa animated CSS inoshandura uye SVG mifananidzo mune dzakasiyana hova.
VideoNG: iyo inoshanda uye yakavimbika injini yekutamba mavhidhiyo pamapeji ewebhu. Gore rino, kugona kuratidza zvirimo zvakachengetedzwa mukugadziriswa kwe4K kwakaitwa. HDR rutsigiro yakawedzerwa kare.
Ratidza: kupatsanura maitiro ekugadzirisa uye kupa, kupatsanura kupihwa kweiyo browser interface kubva mukupa izvo zvemukati zvemukati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chromium Vagadziri Vakaburitsa RenderingNG Project Optimization Mhedzisiro
WINE 6.19 inoenderera mberi ichishanda neHID joystycks uye inodarika chinodzivirira che500 shanduko